कोरियन वन र ओमानी रियाल बाहेक अरु सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो - Tufan Media News
कोरियन वन र ओमानी रियाल बाहेक अरु सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
१४ माघ २०७६, मंगलवार १०:४४
काठमाण्डौ – मंगलबार ओमानी रियाल र कोरियन वनकाे भाउ घटेको छ । अरु सबै विदेशी मुद्राको भाउ भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको थियो । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको थियो ।
आस्थाजी, थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने के*स होइन त्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तपाईं हि*रासतबाहिर हुँदा कसैको जिउधनमा गम्भी*र खत*रा पनि छ जस्तो लाग्दैन । न तपाईं प्रमाण न*ष्ट गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न पदमा हुनुहुन्छ । फ*रार हुने सम्भावना छ भन्ने हो भने तपाईं आफै प्रहरीकहाँ पुग्नुभएको छ । छा*नबिन नै नगर्ने या मु*द्दा नै नचलाउने भन्ने होइन, तर त्यसका लागि प*क्राउ गर्नैपर्ने बलियो आधार केही पनि छैन । भोलि अदालतले जे*ल पठायो या जरी*बाना गर्यो भने कुरो अलग हो ।
पुलिसलाई अ*पशब्द*ले गा*ली गर्नु मात्रै होइन, तपाईंको सबैभन्दा ठूलो ग*ल्ती कामको तहको आधारमा तल्लो ‘वर्ग’लाई हे*प्नु थियो । अझ तपाईंको सफाइमा आएको भिडियोले त मलाई अझ निरा*श बनाएको थियो । तल्लो तहमा काम गर्नेहरू त मान्छे नै होइनन् भन्ने खालको तपाईंको सोच त्यहाँ झल्किन्थ्यो । तपाईंको टिप्पणी मन नपराउनेहरूको ‘औ*कात’ देखिएको भनेर तपाईंले मा*फी होइन, सफाइ माग्नुभएको थियो । आस्थाजी स्वाभिमान र इज्जत सबैको हुन्छ । कामको आधारमा मान्छेको स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन । तपाईंले मागेको मा*फी त सारमा पहिलो भिडियो भन्दा बढ़ी ‘अफेन्सिभ’ थियो । त्यसपछि तपाईंलाई मैले सुनेको छैन ।
एउटा नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने तपाईंलाई थु*नामा राख्न अदालतसँग अनुमति मा*ग्नेहरू ‘प्यू सो, प्यू पा, ब न्दुक्नी या डन्ठि*नी’हरू होइनन् । ती तपाईंले अलि आदर गरेका ‘साप’हरू हुन् । हि*रासतमा तपाईंले ती सापलाई भेट्नुहुन्न । फेरि तिनै ‘ड*न्ठिनी’हरू तपाईंसँग हुनेछन् । कृपया त्यो ‘वर्ग’सँग प्रेम र आदरपूर्वक व्य*वहार गर्नुहोला । ड्युटी निभाउनु तिनको कर्तव्य हो । र, चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्थामा ड्युटी भनेको आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट आउने आदेश नै हो । तिनको कुनै दो*ष छैन ।
जे*ल बस्नु भयङ्कर योग्यता भएको देशमा अरू त के भनम् र ? भनेको कुरो आफैले स्वीकार गरेको, एक हदसम्म मा*फी पनि मागिसकेको, अनुसन्धानमा सघाउँछु भनेको र आफै प्रहरीकहाँ पुगेको व्यक्तिलाई ‘थुनेरै’ अ*नुसन्धान गर्नपर्ने प्रहरीको हिरोपन्थीचाहिँ मजस्ता धेरैलाई पचेको छैन । बरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लडेको भन्नुस्, ह*त्या पनि मा*फ हुन्छ भनेर सिकाउनु पनि भएन । खै के खै के ! तर, खुशी हुने स्यानो कारण के छ भने, त्यो भिडियोले तपाईंको पब्लिक इमेज धेरै घटाएको थियो, यो हि*रासतले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नेछ ।